I-Tahakopa Bay Retreat, i-Catlins, i-South Otago - I-Airbnb
I-Tahakopa Bay Retreat, i-Catlins, i-South Otago
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCameron And Michelle
UCameron And Michelle yi-Superhost
I-Takhopa Bay Retreat isembindini weCatlins kwaye ibonelela ngeendawo ezintle eziselunxwemeni kunye nezasekuhlaleni zehlathi. I-Resort yasekwa yintsapho yaseClarks ehlala kuyo, kunye nefama yomhlaba ojikelezileyo. I-Clarks ibisoloko ifama indlu engaselunxwemeni yehektare eyi-685 eCatlins kwiminyaka eyi-25 eyadlulayo. UCameron noMichelle bangathanda ukwabelana nawe ngeholide yabo eyimfihlo ukuze bonwabele ubumfihlo kunye noxolo olunalo.
I-Tahakopa Bay Retreat inika iindwendwe iholide yabucala, elungele abantu abathandanayo abafuna ikhaya elikumgangatho ophezulu kude nekhaya ukuze baphumle kwindawo ekwindalo. Inazo zonke izinto eziluncedo zale mihla nangona singekho kwi-intanethi. Le ndawo yokuphola ixhaswa yinkqubo engabhatalelwayo.
5.0 · Izimvo eziyi-137
Kufuphi zininzi iindawo ezinamahlathi amafutshane eziya kwiingxangxasi ezinjengePurakaunui ekwindla, iMcLean Falls nayo iCathedral Caves, iNugget Point. I-Long Point apho unokubona ii-penguin zaseYellow Eyed, ezi zezinye zezinto ezimangalisayo ezifumaneka kwiCatlins.
Umbuki zindwendwe ngu- Cameron And Michelle
Sisekude ngeekhilomitha ezimbalwa